Archive du 20180404
TIM- MAPAR-TSY MIANKINA “Ravao ny Antenimieram-pirenena”
Raha mbola avy nandany an’ilay volavolan-dalàna mikasika ny ZES sy nanatrika ny lanonana famaranana ny fivoriana tsy ara-potoana faha-3 tao an’efitrano fivorian’ny Antenimieram-pirenena omaly takariva ireo depiote niisa 79 nandany ihany koa an’ireo volavolan-dalàna fehizoro 3
Lalàna mifehy ny fifidianana Lany tao anatin’ny kolikoly sy ny savorovoro
Lany tao anatin’ny kolikoly sy ny savorovoro ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana.
Antoko Miombon’Ezaka « Tsy izy io lalàm-pifidianana io ! »
Raikitra tokoa, araka ny efa nanampoizana azy, ny savorovoro teny amin’ny antenimieram-pirenena manoloana ny fikasan’ny fitondram-panjakana handany amboletra ireo tolo-dalàna mikasika ny fifidianana notontosaina teny Tsimbazaza omaly.
Depiote Randrianasolo Nicolas Mpanakorontana ireo depiote nivoaka ny efitrano fivoriana
Harofanina ho an’ireo mpanao politika Malagasy no nandanianay depiote 79 mpomba ny fitondrana an’ireo volavolan-dalàna fehizoro niisa 3 mikasika ny fifidianana hotanterahina eto amintsika amin’ity 2018 ity omaly talata 3 aprily, hoy ny depiote Randrianasolo Nicolas,
Latsao ihany izahay e !
Eny ho aho ry Jean ! Ataonareo inona tokoa moa 50 tapitrisa ariary fa ianareo toa hoe efa miliardera daholo e ? Dia arahabaina indray aloha ianareo fa tonga amin’ny tanjona irina koa !
Kaominina Ambohimalaza Mitrandraka tsy miato ny Sinoa
Efa an-taonany izao no mitrandraka vato tsy miato ao anatin’ny kaominina Ambohimalaza ireo teratany sinoa maromaro. Tany ana ha maro no efa potika tanteraka ankehitriny,
Potehin’ny mpanao politika ny firenena Andrasana ny fandraisan’andraikitry ny FFKM
Mikorontana ny firenena ankehitriny ary ahiana mihitsy ny ady saritaka atsy ho atsy raha izao no mitohy.
Taranja Judo Manomboka mahaliana ny ankizy sy ny tanora
Manomboka mahaliana ireo ankizy sy tanora eto amintsika ny taranja Judo ankehitriny. Sady hahafahana mitaiza vatana mantsy izy no hahafahana mifehy ny fihetseham-po ihany koa saingy mila finiavana.
Kick Boxing – Faha-10 taonan’i Me Francis Lalao 30 no natrehana tamin’ny sabotsy teo
Mpikatroka nahatratra 70 avy amin’ny klioba eto Antananarivo sy Antsirabe ary avy any Moramanga no niatrika an’ireo lalao niisa 30 nalahatry ny mpikarakara tamin’ny fankalazana ny faha-10 taona niangalian’i Me Razafimahatratra Francis ny taranja Kick Boxing (lalaon’ny Cadet 6, junior 15 ary Sénior classe C 9), tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina tamin’ny sabotsy 31 martsa lasa teo.
« Tournoi de Pâques 2018 3FA » Nanjakan’i Sabotsy Namehana tanteraka
Ny talata 26 martsa ka hatramin’ny alahady 1 aprily 2018 lasa teo no nanatanterahana ny « Tournoi de Pâques 2018 » nokarakarain’ny Club 3FA Avaradrano tarihan’ny filohany, Rakotonirina Harison Philibert, teny amin’ny kianjan’ny kaominina Ankadikely Ilafy sy ny kianja Herisetra Rafanodiana teny Sabotsy Namehana.
Miantehitra amin’ny hazo boboka !
Nandresy ny tolon’ny fanjakana HVM tamin’ny fampandaniana ny lalàna mifehy ny fifidianana, izay tsy ankasitrahan’ny maro. Mihevitra izany izao fa mahery sy matanjaka na ara-politika na ara-bola.
Fanabeazana Ilana fahaizana ny mitondra lasi-pibeazana
Fiofanana roa no notontosaina teny amin’ny Cemeam Ilafy ny 24 martsa ka hatramin’ny 31 martsa lasa teo.
Sehatra harena ankibon’ny tany Maro ny olana tokony hovahana
Fototry ny tsy fandrosoan’ny firenena ny firafitra izay miankin-doha betsaka amin’ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany mitodika amin’ny fanondranana any ivelany.
Be vaovao mirija Kolontsaina
“Misy antony” ! Io no isaloran’ny fiarahana miaraka amin’ilay andriambavilanitry ny feo manga Malagasy, Lalatiana, etsy amin’ny Food court – La City Ivandry rahampitso alina.
Hisy ny fandefasana mpianatra any Sina momba ny fanajariana ny tany. Noho ny fahatsapàna fa tsy avotra intsony ny tanànan’Antananarivo rehefa amin’ny vaninandro avy orana no antony.
LALANA MIFEHY NY FIFIDIANANA
Fandresen’ny Demokrasia no nitranga teny amin’ny Antenimierampirenena androany, hoy ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier omaly satria ny maro an’isa no nandany ireo ny lalàna fehizoro mikasika ny fifidianana.
Mpianatra 8 miandahy ao amin’ny INSCAE Nahatsangana "coin bibliothécaire"
Mpianatra 8 mianadahy dia Rakotozafy Miray, Rajaofara Landy, Razafinirina Clara, Rakotovao Tsiky, Andriamanantsoa Manoritantely, Ranaivoson Arly, Ranaivoson Sandy, Randrianarisata Sylvio, taona faharoa ao amin’ny sekoly ambony INSCAE, mitondra ny anarana hoe "Innovation project" no nanatanteraka tetikasa ara-tsosialy, tamin’ny alalan’ny fananganana "coin bibliothécaire" tao amin'ny "Centre Olom-baovao Hospice et Orphelinat Ambohimahitsy", ny 29 martsa lasa teo.
Famotehana an’i Madagasikara Azo toherina tsara
Mandeha hatrany ny fanapotehana moramora an’i Madagasikara. Miainga amin’ny fanimbana ny sehatra fampianarana izany ary mipaka hatrany amin’ny toekarena iray manontolo mihitsy.